Ninja lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Manomana mahagaga ny niatrika an'izany, fahaizany mamikitra, mahafinaritra fahaiza-manao sy reappear hanjavona tampoka, ny fampiasana ny fitaovam-piadiana sy ny tenan'ny malaza Ninja. Session lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Ninja hampiseho aminao ny fitaka izay tompony ireo mpiady. Izy ireo dia nokaramainy ho an'ny asa mampidi-doza indrindra, ary rehefa tonga ny lalao no mahazo fahatsapana Nuance rehetra. Toa ho avy avy amin'ny aloka sy hampifanaraka izany araka ny asa. Mangina mangalatra, manao zavatra avy hatrany izy ireo. Ny fomba fiainany dia foana fiofanana, satria misy fiantraikany eo ny fanatanterahana ny baiko sy ny fiainany.
Lalao Ninja tamin'ny Category:
New Battle Ninja 2
Lego: Ninja Mandehana - Master spindzhitsu
Mandehana Ninja: Mitsangàna Nindroidov
Ninja amin'ny endrika baolina
Dity Ninja Mission
Ninja tsy misy sabatra
Ninja Hamster manohitra milina
Bakken Borris - Ninja Fanafihana amin'ny
Angano ady - 2
Andriamanitra Telo Izay Iray Stikmenov2: Mpamono Olona Zombies
3-tongotra Ninja 3
Aloky ny Ninja 2
Ninja Mafia fahirano 3
Iray tapaka lalan-dra Ninja
Nindzyago: Tany ny Maty
Iray hafa Planet 3: Ny fitaovam-piadiana vaovao
Iray hafa Planet 2
Ninja Go: Fahalavoan'i Spinjitzu
Ninja: Cool Adventures
Ninja Go Fitokonana Spinjitzu
Mandehana Ninja: Ninja Code
Malaza Go Ninja: Ninja Ady
Fanivànana ny mpamadika 2
Mpamono Ninja 3
Môtô Ninja - Sokatra
Ninja Mandehana. Legend ady 2
Sokatra Ninja zatovo Mutant: Manateteva indray!
Nindzhago miafina key
Hong Kong Poa: olana karate
Sokatra Ninja zatovo Mutant: Street Ady
Sokatra Ninja Race ao amin'ny sewers
Sambatra Monkey: Ninja 3
Fitadiavana Kung Fu: Jade Tower fahaveloman'ny
Jay sisa velona
Lalao Ninja Jump Mini
Ninja Warrior Alemana Ankizy: Ninja Run
Ny taona manaraka
Skava Skateboava Lava Sy Nninja
Lalao Ninja novoriny ny fantatra sy tsy fantatra mahery fo aminareo, izay manana fahaiza-manao atsinanana tolona
Lalao Online Rehetra Ninja lalao
Lalao Ninja mpitsikilo ho an'ny beginners
Ninja, no dia izay miafina, miafina, miafina. Koa, izany ny mpamono olona, ​​mpitsikilo, mpitsikilo, mpitsikilo sy saboteur. Ireo mpikatroka no teraka sy lehibe tao Japana, fa manerana izao tontolo izao noho ny fiaretany malaza, herim-po sy elusiveness. Tsy misy zavatra ratsy noho ny fihaonana amin'ny voaofana mpamono, izay manana toe-javatra tonga lafatra sy ny vatanao. Ninja saro-takarina sy nataony. Momba azy ireo handeha hitranga angano, milaza mikasika ny zava-miafina sy ny fanjavonana tarehy. Ninja mikisaka amin'ny fahasoavana ny saka mianika an'ilay fiakarana, be dia afaka manda ka nanjavona an manify rivotra. Izy ireo dia nokaramainy, rehefa tsy maintsy mahazo ny vaovao, ary amin'ny fahavalo. Ny zavatra ireo kosa dia mihodina eo amin'ny fitaovam-piadiana, fa ny tombony dia omena ho fitaovam-piadiana ny nentim-paharazana.
shuriken - mitoraka kintana amin'ny taratra lelany.
kusarigama - fitaovam-piadiana eo amin'ny endriky ny fijinjana na scythe, izay mihantona eo amin'ny tahony ny rojo.
Ninja hafa - ny sabatra dia ho amin'ny scabbard izay matetika mifamatotra amin'ny tady. Part izany tapaka, raha ilaina ny manana rohy mankany ny mpanohitra. Ny sabatra sy ny tady koa nampiasaina nandritra ny fiakarana ho any amin'ny avo - vokany Nahantona dingana.
Ninja lehibe manam-pahaizana manokana amin'ny poizina sy ny isan-karazany ireo izay zavatra haingana, miadana, na hiverina fotoana. Poizina miharo an-tsy zava-pisotro na ny sakafo, fa nihantona kotsa ny randrana ho an'ny natory ny olona, ​​ary rehefa nanakodia nilatsaka teo vitsivitsy eo am-bavan'ny na tsofina ny niharam-boina.
ihany koa ny basy mihatra. Ataoko eo afo ho ny jiro ny voampanga vovoka syurekena ka dia notoraham ny tampon-trano ny mololo. Na dia mampiasa tokana-tifitra musket (miray feo), mitovy basy kely.
Mba ninjas mbola tsy hita maso, ny fitaovam-piadiana dia tokony hangina. Noho izany, ho fanampin'ny nentim-paharazana sabatra sy tsipìka dia lasa manokana napetraka ny ady. Matetika miaramila nanova tarehy izany ho eny ambanin'ny fitaovana ho an'ny fambolena na tokantrano zavatra. Amin'izany fomba izany dia hahazo ny vokatry ny fihaonana tampoka, rehefa ny fahavalo.
Avy amin'ny tantaran'ny ny Ninja ao amin'ny lalao
Ary fa efa nirohotra mampahafantatra ny mpiady ao amin'ny Atsinanana amin'ny fahitalavitra, ary lalao Ninja dia hita ao amin'ny lehibe isan-karazany, dia tsy toa izany filazana loza izao. Izany ihany no solika ny mahaliana azy, nitodika mpamono olona mifono mistery endri-tsoratra. Tsy mahatonga anao te-hitady am-pototry ny saron-tava mba hahita ny tavany. Na izany aza, manaraka ny fomban-drazana ny tsiambaratelo ary tsy manaisotra azy ireo amin'ny zava-miafina ny farany - na dia mbola eto an-tany avengers, toy ny teo aloha.
Manasa anao izahay mba hilalao an-tserasera lalao Ninja, izay be dia be ny asa sarotra. Mba hahazoana fanazavana ho anao ny manakarama tanana, dia handresy tranobeny, vita, ala ady amin'ny miaramilan'ny fahavalo, milina sy ny biby goavam-be.
Mampiasa misy fitaovam-piadiana, ary mitady fomba mba hameno ny fanavaozana. Mitadiava fomba mora sy azo antoka hanafika ny fanariana. Matetika ny hetsika mitovy ny fampisehoana amin'ny SAINA FANETRI-BEN'NY, izay ny mahery fo dia voatery ho eo amin'ny haavon'ny somersaults, mitsambikina ny elanelana misy eo amin'ny trano, ny fifandanjana eo amin'ny tady sy deftly nihazona tamin'ny sisiny teo amin'ny rindrina.
Lego nanomana amin'ny fanomezana maimaim-poana tsy nampoizina lalao an-tserasera Ninja. Ninja Mandehana manadio ny tanàna avy ny fananiham-bohitra ny taolany, miady azy syurekenami sy ny sabers. Fihaonana amin'ny fahavalo hafa hanana injeniera maro hafa lalao, ary foana Reseo Ireo Vato Misakana sy ny ady amin'ny fahavalo masiaka.
Sokatra Ninja lalao eo aminareo koa, fa ankoatra ny mahery fo miady hampianatra anao ny fomba mahandro ny pizza, tselatra tapaka vokatra samouraï sabatra, ary mitaingina bisikileta. Ary raha tianao, hisoratra anarana tany an-tsekoly sy ho tonga ny tsara indrindra samouraï ny miaramila.